Filoha Rajaonarimampianina : « Hihazakaza amin’ny sosialim-bahoaka isika… » | NewsMada
Filoha Rajaonarimampianina : « Hihazakaza amin’ny sosialim-bahoaka isika… »
« Hanamarika ity taona ity ny hihazakazahantsika amin’ny sosialim-bahoaka ary indrindra ny toekarena », hoy ny filoha Rajaonarimampianina, raha nihaona tamin’ny mpanao gazety, omaly teny Iavoloha. Notsiahiviny ny handraisantsika ireo fihaonana an-tampony, Frankofonia sy ny Comesa. Nambarany fa hiantraika amin’ny toekarena sy ny sosialy izany. « Hiteraka asa io hanararaotana hanorenana fotodrafitrasa samihafa. Fanitarana ny seranana Ivato. Hitombo ny mpizahatany satria tsy ampy io ka mila hatsaraina. Hanamboatra ny lalana isika. Hitantsika ny amboteazy ka hovelarina ny lalana. Inona ny maharatsy izany ? Hiteraka fampandrosoana ny tanana », hoy ihany ny filoha. Nanteriny fa handray ireo vahiny amin’ny ananantsika sy ny maha izy antsika isika na mahantra aza.
Momba ny fivoahany any ivelany matetika, nambarany fa mitondra tombontsoa izany ary tsy nivaha ny sazin’ny iraisam-pirenena raha tsy natao izany. Notsiahiviny fa tsy afa-nivoaka ny fitondrana Tetezamita noho ny sazy ary nivoaka imbetsaka noho ny amin’izao fotoana koa ny mpitondra teo alohan’ny 2009.
Harenina ny fomba fiasa hiarahana amin’ny mpamatsy vola
Niaiky koa ny tenany fa betsaka ny tokony hatao amin’ny sosialim-bahoaka. Na izany aza, efa nisy ny vita toy ny fanabeazana, namerenana an-tsekoly ireo mpianatra ka nanomezana fitaovana sy sakafo azy ireny. Ny fanokafana ny CSB sy fampidirana rano fisotro madio…
Niaiky koa anefa ny filoha fa misy lesoka ny fiaraha-miasa amin’ireo mpamatsy vola. « Mila harenina izany. Ny ady amin’ny kolikoly, ny fanjakana tsara tantana ary ny mangarahara… Ekeko izany ary anjaran’ny rehetra ny mijoro amin’ny andraikiny », hoy Rajaonarimampianina.
Amin’ny ankapobeny, naverimberin’ny filoha ny amin’ny tokony hijerena ny tombontsoan’ny firenena sy ny vahoaka.